‘रक्सी नपिउनुहोस्, चुरोट नपिउनुहोस्, कसरत गर्नुहोस् र फलफूल-सागसब्जी खानुहोस् ।’
सन् २०१२ मा रोबर्ट मुगाबेले उक्त कुरा त्यतिबेला भनेका थिए जतिबेला उनी आफ्नो ८८औं जन्मदिन मनाइरहेका थिए ।
‘मलाई भगवानले नियुक्त गरेका हुन्, भगवानबाहेक अरु कसैले मलाई हटाउन सक्दैनन् ।’ मुगाबेले यस्तो दावी सन् २००८ मा एक चुनावी र्‍यालीको क्रममा गरेका थिए ।
‘हामी भोका छैनौं …. यो खाना हामीलाई किन थपिरहिएको छ ? हामी चाहन्नौं कि हाम्रो मृत्यू होस् । हामीसँग जे छ, पर्याप्त छ ।’\_
रोबर्ट मुगाबेले यस्तो धुर्त कुरा सन् २००४ मा स्काई टिभीलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा त्यतिबेला भनेका थिए जब जिम्बाब्वे खाद्यान्न संकटसँग जुधिरहेको थियो ।
‘क्रिकेटले मानिसलाई सभ्य बनाउँछ, सज्जन बनाउँछ । म चाहन्छु कि जिम्बाब्वेमा हरेक व्यक्ति क्रिकेट खेलून् । म चाहन्छु कि हाम्रो देश सज्जनहरुको देश बनोस् ।’
मुगाबेका यी तमाम कुराहरुले उनको व्यक्तित्वको अलग-अलग पक्ष स्पष्ट पार्छ ।
कसैका लागि शैतान, कसैका लागि क्रान्तिकारी
मुगाबेको बारेमा विश्वका नेताहरुको व्याख्या जहिले पनि बाझिँदै आएको मानिन्छ । कसैले उनलाई राक्षसकै रुपमा चित्रण गर्छन् । तानाशाह मान्छन्, जसले मुगाबेकै कारण आफ्नो जीवन जेलमा बिताउनु पर्‍यो ।
त्यसो त कतिपय मानिसहरुका लागि मुगाबे एक क्रान्तिकारी नायक थिए, जसले रंग तथा जातीय विभेदविरुद्ध लडाई लडे । जसले पश्चिमी साम्राज्यवाद र नव-उपनिवेशवादका विरुद्ध आफ्नो झण्डा सधैं दह्रोगरी उठाइरहे ।
अहिलेको जिम्बाब्वे अफ्रिकी महाद्वीपमा यस्तो भूभाग हो जुन स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडि रोडेशिया अर्थात् अपरिचित राज्यको रुपमा परिचित थियो ।
बेलायतको उपनिवेश भएको कारण त्यहाँ गोराहरुको संख्या कम भए पनि उनीहरु शासकका रुपमा थिए । जबकि कालाहरु बहुसंख्यक भए पनि गुलामको नियति भोगिरहेका थिए ।
यसको विरोध गरेको भन्दै मुगाबेलाई कुनै सुनुवाइ बिना नै जेल पठाइयो । एक दशकभन्दा बढी जेलमा समय बिताइसकेपछि जब मुगाबेको रिहाई भयो, उनी मोजाम्बिक गएर छापामारको सहयोगमा रोडेशियालाई स्वतन्त्र बनाउने प्रयास गरे । उनी एक चलाख वार्ताकारको रुपमा राजनीतिक सम्झौताका गर्दै एक नयाँ र स्वतन्त्र जिम्बाब्वे गणतन्त्रको मार्ग प्रशस्त गरे ।
स्वतन्त्रताको लडाईमा मुगाबेले महत्वपूर्ण भूमिकाको मू्ल्यांकन गर्दै १९८० मा भएको पहिलो चुनावमा जनताले उनलाई शिरमा उठाए, आँखामा राखे र सत्ताको साँचो बुझाए ।
जनताले बुझाएको उक्त सत्ताको साँचोलाई झण्डै चार दशकसम्म मुगाबेले आफ्नो मुट्ठीमा कसेर राखे ।
अत्यन्त नाटकीय घटनाक्रमका बीचमा जिम्बाब्वेले एक नयाँ बिहानी सन् २०१७ मा त्यतिबेला देखे जब सेनाले सत्तामाथि नियन्त्रण गरेर मुगाबेलाई राजीनामाको लागि बाध्य बनाइदियो र इमर्सन मननगागवा देशका नयाँ राष्ट्रपति बने ।
नायक यसरी बने खलनायक
सन् १९८० मा स्वतन्त्रतापछि रोबर्ट मुगाबेले गरेको एक भाषण जिम्बाब्वेका नागरिकले अझै पनि याद गर्छन् ।
उक्त भाषणमा मुगाबेले भनेका थिए, ‘तपाईं कालो हुनुहोस् वा गोरा, म तपाईंलाई निमन्त्रणा गर्दछु, आफ्नो विगतलाई भुल्दै, माफी दिँदै आउनुहोस् हामी एक-अर्कासँग हात मिलाऔं र एउटा नयाँ जिम्बाब्वे बनाऔं ।’
रोबर्ट मुगाबेसँगै स्कूल पढेका लोरेन्स बम्बे उक्त भाषणलाई स्मरण गर्दै भन्छन्, ‘मुगाबको ती शब्दहरु कमालका थिए । ती शब्दहरुले मेरो छाती फराकिलो बनाइदिन्छ । संघर्षपछि जति पनि गोराहरु फर्कँदै थिए, उनीहरुमध्ये धेरैले यो मान्छे नराम्रो होइन त्यसैले देश छाड्नु हुँदैन भन्ने सोचेका थिए ।’
रोबर्ट मुगाबेका एक फरक अनुहार सन् १९८३ मा देखियो, जब उनले आफ्नो राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई सखाप पार्नका लागि आफ्नो सेनाको छानिएको बिग्रेडलाई प्रयोग गरे । एक अनुमानका अनुसार त्यसक्रममा झण्डै २० हजार मानिसलाई निदर्यीरुपमा हत्या गरियो ।
आकाशदेखि जमिनसम्म मुगाबे
जिम्बाब्वेका राजनीतिक विश्लेषक जोन मकुम्बे भन्छन्, ‘रोबर्ट मुगाबे जब कसैले चुनौती दिए तब उनको फरक अनुहार देखिन थाल्यो । उदाहरणको लागि जब कसैले मन्त्रिपरिषदबाट राजीनामा दिने धम्की दिन्थ्यो भने मुगाबले राजीनामा अस्वीकार गर्थे तर, उनलाई सिधै पदबाट बर्खास्त गरिदिन्थे ।’
राष्ट्रपति मुगाबेसँग सूचना मन्त्रीको रुपमा काम गरिसकेका जोनाथन मोयो एक अर्को उदाहरण दिँदै भन्छन्, ‘जब कुनै महत्वपूर्ण बैठक हुन्छ, राष्ट्रपति मुगाबे सबैभन्दा अन्तिममा पुग्थे । मुगाबे आउनुभन्दा अगाडि वातावरण एकदमै सामान्य हुन्थ्यो । सबै एकअर्कासँग कुरा गरिरहेका हुन्थे, तर जब उनी आउँथे सबै चुप हुन्थे र मुगाबेले जे भन्छन्, त्यसैमा सही थाप्थे ।’
मण्डेला भर्सेस् मुगाबे
दक्षिण अफ्रीकामा रंगभेदको विरुद्ध लामो संघर्ष गर्ने नेल्सन मण्डेला मुगाबेका समकालीन थिए । मण्डेलाले मुगाबेभन्दा अत्यधिक लामो समय जेल जीवन बिताए ।
सन् १९९० मा मण्डेला जेलबाट छुटेपछि मुगाबेलाई लाग्यो कि मण्डेलाका अगाडि उनको कद सानो देखिन थालेको छ ।
बेलायतका विदेशमन्त्री रहिसकेका सर माल्कम रिफकेन सम्झिन्छन्, ‘यसमा कुनै शंका छैन कि मुगाबे अफ्रिकामा मुक्ति आन्दोलनका एक हिरो थिए । तर त्यतिबेलासम्म मात्र जतिबेलासम्म नेल्सन मण्डेला जेलबाट रिहा भएका थिएनन् मुगाबेले मण्डेलाको रिहाईको स्वागत त गरे तर उनी अफ्रिकामा अचानक दोस्रो नम्बरमा पुगे ।’
चाटुकार, कमजोर व्यवस्थापन र भ्रष्टाचार
मुगाबे सामान्यतः चाटुकारहरुबाट घेरिएर रहे र उनको सरकार कमजोर व्यवस्थापन र भ्रष्टाचारमा डुबिरह्यो ।
मुगाबेकी पहिली पत्नी सेएली त्यस्तै मानिसहरुमध्ये एक थिइन्, जसलाई मुगाबेले धेरथोर सुन्ने गर्दथे । तर, सेएलीको निधनपछि मानिसहरुलाई लाग्यो कि अब मुगाबेलाई रोक्न सक्ने कोही बाँकी छैन ।
सन् १९९६ मा मुगाबेले आफ्नो सेक्रेटरी ग्रेससँग दोस्रो विवाह गरेपछि मानिसहरु अचम्भित भए । अत्यधिक खर्चिलो विवाह समारोहको आयोजना गरिएको थियो जहाँ हजारौं अतिथीलाई बोलाइएको थियो ।
ग्रेस मुगाबेभन्दा ४० वर्ष कान्छी थिइन् र उनी यति शौखिन र महंगी थिइन् कि उनलाई अचम्मकी ग्रेसको नामबाट बोलाउन थालियो ।
मुगाबेले देशको स्वतन्त्रताका लागि सहभागी भएका वरिष्ठ नागरिकका लागि डलरौं रकम दिने अप्रत्याशित फैसला गर्दै जिम्बाब्वेको बजेटलाई ध्वस्त बनाउन थाले । कंगो गणराज्यसँगको क्षेत्रीय युद्धका कारण पनि अर्थतन्त्र डुब्न थालिसकेको थियो ।
जब विपक्षीले राष्ट्रपतिको शक्तिलाई कम गर्नका लागि संविधानमा केही परिवर्तनको माग गरे, राष्ट्रपति मुगाबले हिंसामार्फत् यसको आधिकारिक जवाफ दिए ।
तर, जब विरोध-प्रदर्शन बढ्न थाल्यो, राष्ट्रपति मुगाबेले दमनको सट्टा संविधानमाथि जनमत संग्रहको बाटो चुने, जसलाई खारेज गर्दै नागरिकले राष्ट्रपति मुगाबेलाई चुनावमा हराएर पहिलो झड्का दिए ।
देशमा लोकतान्त्रिक र संवैधानिक सुधारको मागले गति लिइरहेको थियो । हिंसाले समाधान दिन सकिरहेको थिए । मुगाबेलाई यसको समाधान गर्न जमिन नयाँ शिराबाट नागरिकलाई बाँड्ने फैसला गरे ।
तर जमिनको बाँडफाँट बाँदरे प्रवृत्तिबाट भएपछि देशको हालत थप खराब भयो । अर्थव्यवस्थाको अवस्था कमजोर हुन थाल्यो र विदेशी लगानीकर्ताहरु फर्कन थाले । मृतप्रायः अर्थव्यवस्थाका कारण लाखौं मानिसहरु जिम्बाब्वे छाडेर विदेशिन थाले । मुगाबेले यी सबैको दोष बेलायतको टाउकोमा थुपारे ।
अचम्मको कुरा त बेलायतलाई गाली गर्दागर्दै पनि उनी आफ्नो दोस्रो पत्नीका साथ किनमेलका लागि बेलायत गइरहे ।
यसबीचमा रोबर्ट मुगाबेलाई लिएर अमेरिका र युरोपियन युनियनले नाकाबन्दी गरेपछि जिम्बाब्वे अलगथलग बन्न थाल्यो । चुनावमा धाँधलीको आरोप लागेपछि उनले अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाको सामना गर्नुपर्‍यो ।
पुनः सन् २००८ मा आशाको दुर्लभ किरण देखिन थाल्यो जब रोबर्ट मुगाबेले आफ्ना प्रतिपक्षीसँग मिलेर सरकार बनाए ।
अवस्था केही समयका लागि सुध्रियो तर अर्को चुनावमा मुगाबे र उनको पार्टीको जित भयो र विपक्षीले चुनावी परिणामलाई धाँदली भएको भन्दै अस्वीकार गरिदिए ।
यद्यपि, मुगाबे फेरि पनि सत्तामा टिकिरहे र उनको तौरतरिकाका कारण अर्थव्यवस्था डुबिरह्यो र आम मानिसको जिन्दगीको अवस्था बिग्रिँदै गइरह्यो ।
सन् १९८० मा जुन सपना देखाएर मुगाबे पहिलोपटक सत्तामा आएका थिए, उक्त सपना सामाजिक र आर्थिकरुपमा चार दशकसम्म पनि पूरा हुन सकेन ।
नतिजाको रुपमा सन् २०१७ मा सेनाले मुगाबेलाई सत्ताबाट हटाइदियो र इमरसन मननगागवालाई राष्ट्रपति बनाइदियो । उनी कुनैबेला मुगाबेका खास मानिस थिए ।
तर, नयाँ सरकार बने पनि जिम्बाब्वेको अर्थव्यवस्था अहिले पनि डामाडोल छ र गरिब पनि उही अवस्थामा छ । जिम्बाब्वेका लागि यो अवस्था मुगाबेको उपहार हो, जुन उपहारको अपेक्षा गर्दै नागरिकलाई ४० वर्ष अघि सत्ताको साँचो सुम्पिएका थिएनन् ।